Hada barnaamijka taxanaha ah "I framsätet" wuxuu ka soo muuqday Himlen TV7. Qofka ugu horeeya ee la wareysto wuxuu ahaa aniga. Halkan kore waxaan kudarsaday barnaamijka Youtube.
Xor ayaad u tahay inaad fiiriso oo aad la wadaagto dad badan intii suurtagal ah. Barnaamijku sifiican baa loo qabtay oo wuxuu leeyahay markhaati Ciise taabanaya oo aad u xoog badan.
Christer Åberg "Kursiga hore"
"Waxa kaliya ee xambaarsan waa ciise. Christer Åberg wuxuu tan kula soo kulmay caqabadaha adag ee nolosha. Christer waa blogger iyo qoraa wuxuuna wadaa, waxyaabo kale, apg29.nu".
Tixda taxane ah "Kursiga hore", Per Åkvist wuxuu dadka xiisaha leh ku qaadaa baabuur xiiso badan wuxuuna kula hadlayaa iyaga oo kusii jeedda qaxwada.